Waa maxay arrinkaas ery?
Habka arrinkaas Password ku lug leedahay soo kabsaday password ka goobo lagu keydiyo ama laga xogta, lagu kala qaado nidaamka kombiyuutarka ee network. Password arrinkaas xilli loola jeedaa koox ka mid ah farsamooyinka loo isticmaalaa in lagu password ka nidaamka xogta ku helo.
Ujeedada iyo sabab ah arrinkaas password ka mid ah helo aan la fasaxin in nidaamka kombiyuutarka ah ama waxay noqon kartaa dib u soo kabashada ee password illoobay. Waxaa laga yaabaa in sabab kale oo la isticmaalayo password arrinkaas farsamo waa loo baaro xoog password si Hackers ma khawano karin nidaamka.
Qab qabashada Password waxaa sida caadiga ah la sameeyaa maleeyeen habka soo noqnoqda, taas oo computer khuseysaa gaynta kala duwan ee password ilaa kulanka saxda ah.
Caayaan Force Password Cracking:
Term ciidamada caayaan arrinkaas password kale oo laga yaabaa in loo gudbiyo sida weerarkii ciidamada caayaan. Caayaan arrinkaas password ciidanka waa habka kala murmin xaalkooda password, ee software-socodka ama qalab abuuraa tiro badan oo ah isku password. Asal ahaan waa farsamo raad-iyo-qalad loo isticmaalo software si aad u hesho macluumaad password ka nidaamka.
A weerar xoog caayaan waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa by Anonymous ayaa marka ay jirto wax fursad ah oo ka faa'iidaysanaya nidaamka Windows XP daciifnimo ama khubaro falanqaynta ammaanka si ay u tijaabiso ammaanka Shabakada habka urur ee arrinkaas password waxaa si dhakhso ah loogu sirta dhererka gaaban laakiin sirta dhererka dheer weerar dictionary farsamo si caadi ah loo isticmaalo.
Waqtiga qaaday software arrinkaas password ciidamada caayaan in crack password sida caadiga ah waa ku xidhan xawaaraha nidaamka iyo internet.
GPU waa qaybta naqshadeynta processing, mararka qaar la yiraahdo qaybta processing muuqaal ah. Ka hor inta hadleynaa arrinkaas password GPU waa in aan qaar ka mid ah waxay leeyihiin faham ku saabsan hashes . Marka user qortaa erayga sirta macluumaadka sirta ah lagu kaydiyaa foomka of hashes computer iyadoo la isticmaalayo mid ka mid ah hab-geynta ahato ah.
In password this arrinkaas farsamo oo isticmaalaya software GPU qaadan malee sir ah oo soo eeg iyada oo isku geynta ahato oo oo barbardhigaan ama u dhigma la hashes jira ilaa kulanka saxda ah.
GPU karo hawlaha xisaabta ee isku midka ah sida GPU leeyihiin boqolaal muhiimka ah in siinayaa faa'iido weyn ee arrinkaas password. GPU waa ka dhakhso badan processor si sabab u ah iyadoo la isticmaalayo GPU halkii processor.
CUDA Xisaabiyaan Device Midaysan Architecture waa tusaale barnaamijyada iyo boosteejo ah in qabtaan xisaabaat ee isku midka ah, ay abuureen NVIDIA u graphic processing.
CUDA Password arrinkaas waxaa ka mid ah arrinkaas sirta isticmaalaya kaarka Graphics taas oo ay qori GPU, GPU karo hawlaha xisaabta ee isku midka ah si xawaaraha password arrinkaas waa ka dhaqso badan CPU.GPU leeyihiin chips 32bit badan oo ku yaal in qalliin taas si dhakhso ah.
Waxaanu si fudud u heli karaan CUDA maktabadaha, dardaaranka iyo iyadoo la kaashanayo luqadood oo kala duwan oo ay ku jiraan barnaamijyada C, C ++ iyo FORTRAN.
Cracking Password Tools
Marka la eego hoose waa liiska qalabka arrinkaas Password Top10.
1. Qaabiil iyo Haabiil: Top arrinkaas password qalab loogu Windows
Qaabiil & Abel waa mid ka mid ah qalab ugu sareeya arrinkaas u qoslaan sirta ah iyo soo kabashada password for Windows OS.
Qaabiil & Abel isticmaali kartaa farsamooyin ah Dictionary Weerarkii, caayaan-Force iyo weeraro Cryptanalysis in crack sirta ah lo. Sidaas waxa keliya oo isticmaala itaaldarrada nidaamka lagu furfuro password. Gui interface of software waa mid aad u fudud oo si sahlan ay u isticmaalaan. Laakiin waxay leeyihiin xad helitaanka, qalab oo keliya diyaar u ah nidaamka suuqa kala salaysan .Cain & Abel qalab waxay leedahay waxyaalo badan oo wanaagsan qaar ka mid ah muuqaalada qalab ayaa laga wada hadlaa hoos ku qoran:
Features Qaabiil & Abel:
Waxaa loo isticmaalaa in WEP (banki Privacy Equivalent) arrinkaas
Nej si ay u qoraan wadahadal IP
Cab loo isticmaalo Network Password uriya
Awoodda si loo xaliyo IP cinwaanada in MAC.
Crack karaa run ah oo ay ka mid yihiin hashes su'aaalo iyo hashes NT, macruufka iyo hashes PIX, gacan hashes, sirta RDP, iyo farabadan oo ka sii badan.
Site u Download:
2. John Ripper ah: Multi-madal, awood leh, password debecsan qalab arrinkaas
John Ripper waa multi ama cross software ah oo lacag la'aan ah password madal arrinkaas. Its loo yaqaan multi madal sida ay isku daraa muuqaalada kala duwan arrinkaas password galay mid ka mid xirmo.
Waxa ugu horrayn loo isticmaalaa in lagu crack sirta daciif ah UNIX laakiin sidoo kale diyaar u ah Linux, Mac, iyo Windows. Waxaan ku ordi karo software ka gees encryptions password kala duwan oo ay ku jiraan hashes badan password sida caadiga ah laga helo nooc oo kala duwan UNIX. Hashes Kuwani waa DES, su'aaalo hash ee Windows NT / 2000 / XP / 2003, MD5, iyo AFS.
Features ee John Ripper ah
Taageero la caayaan arrinkaas password xoog iyo weeraro dictionary
Available lacag la'aan ah in loo isticmaalo
Pro version sidoo kale waa la heli karaa iyada oo siyaada ah
3. Aircrack: WEP Fast iyo wax ku ool ah / WPA qalab arrinkaas
Aircrack waa mid isku jira qalab kala duwan loo isticmaalo WiFi, WEP iyo WPA sirta arrinkaas. Iyada oo taageero ka qalabka aad crack karin sirta WEP / WPA si fudud oo wax ku ool ah
Force caayaan, weerar FMS, iyo weeraro dictionary farsamooyinka loo isticmaali karaa in crack sirta WEP / WPA. Asal ahaan waxa ururiya iyo lafaguridda xirmooyin lo markaas ka mid ah xirmooyin isticmaalaya ay crack qalab password kala duwan. Inkastoo aircrack ayaa diyaar u ah Windows balse waxaa jira arrimo kala duwan oo la software haddii aan u isticmaalno this ee deegaanka Windows, sidaas darteed waa ugu fiican marka aan u isticmaalno in deegaanka Linux.
Features ee Aircrack
Taageero labada ciidan caayaan oo dictionary weeraro arrinkaas farsamooyinka
Heli Windows iyo Linux
Available in CD live
4. THC Hydra: Adeegyada Multiple taageero, cracker sugida Network
THC Hydra cashada network si degdeg ah qalab arrinkaas sirta ah. Waxa uu isticmaalaa network si crack sirta nidaamka fog.
Waxaa loo isticmaali karaa in crack lambarka sirta ah ee hab maamuuska kala duwan oo ay ku jiraan https, HTTP, FTP, SMTP, Cisco, CVS, SQL, SMTP iwm Waxay ku siin doontaa fursad u ah in aad keento laga yaabaa file a dictionary in ku jira liiska ay suurtagal tahay sirta ah. Waxaa fiican marka aan u isticmaalno in deegaanka Linux.
Features ee THC Hydra
Fast xawaaraha arrinkaas
Heli Windows, Linux, Solaris iyo OS X
Modules New si fudud loo dari karaa si kor loogu qaado muuqaalada
Taageero xoog caayaan oo weerar dictionary
5. RainbowCrack: Innovation New in Password Cracker Hash
Software RainbowCrack isticmaalaa miisaska, madaxeedana waxaa lagu furfuro hashes, in si kale loo dhigo waxaan dhihi karaa waxa uu u adeegsanayaa habka ganacsiga waqti-xasuusta baaxad weyn oo ay u wax ku ool ah oo degdeg ah arrinkaas password.
Baaxad weyn oo ay mar-xasuus-ganacsiga-off waa geedi socod lagu kombiyuutarka oo dhan hashes iyo far caadi ah iyagoo isticmaalaya geynta hash soo xulay. Ka dib markii la xisaabiyo, helay natiijada ay ku kaydsan yihiin in miisaska loo yaqaan miiska qaansoroobaad. Hab-abuurista miisaska, madaxeedana waa waqti badan ayey laakiin markii ay software samaysay shaqeeyaa si dhakhso ah.
Password arrinkaas la isticmaalayo miiska qaansoroobaad waa ka dhaqso badan hab weerar xoog caayaan caadiga ah. Waa nidaamka ka hawlgala Windows Linux oo la heli karo.
Features ee Rainbow Crack
Run Support miisas Rainbow
Waddaa on Windows (XP / Vista / 7/8) iyo Linux ka hawlgala nidaamyada (x86 iyo x86_64)
Simple in la isticmaalo
6. Ophcrack: Tool for Windows password arrinkaas
Ophcrack loo isticmaalaa in lagu crack sirta user Windows iyadoo la kaashanayo qaansoroobaad, miisaskii oo la heli karo ee CD ah Downlaods.
Ophcrack gebi ahaanba bilaash ah si ay u soo bixi, Windows ku salaysan cracker password isticmaala miisaska, madaxeedana waxaa lagu furfuro sirta user Windows. Waxaa sida caadiga ah dildilaaca su'aaalo iyo NTLM hashes. Software waxay leedahay gui fudud iyo waddaa awoodo ku dhufto ee kala duwan.
Features ah Ophcrack
Heli Windows laakiin sidoo kale diyaar u ah Linux, Mac, Unix, iyo OS X
Isticmaala u hashes su'aaalo ee Windows iyo NTLM hashes ee Vista Windows.
Rainbow miisaska laga heli karaa lacag la'aan ah oo si fudud u Windows
Si loo fududeeyo habka ah ee arrinkaas Live CD waa la heli karaa
7. Burutus: A cracker weerar xoog caayaan nidaamyada fog
Burutus waa software ugu dhaqsiyaha badan, ugu dabacsan, oo ugu caansan loo isticmaalaa in lagu crack sirta nidaamka fog. Waxaa u maleynayaa in password iyada oo codsanaya siyaabood oo kala duwan ama adigoo isticmaalaya qaamuus ah.
Waxaa loo isticmaali karaa hab maamuuska network kala duwan oo ay ku jiraan HTTP, FTP, IMAP, NNTP iyo noocyada kale sida SMB, Telnet iwm Waxa kale oo ay ku siinaysaa aad xarunta abuuraya aad nooca sugida. Waxaa sidoo kale ka mid ah fursadaha dheeraad ah oo load iyo resume, si hannaanka la aqbalsan yahay karaa marka loo baahan yahay oo aad dib u bilaabi karo habka marka aad rabto.
Waxaa kaliya oo loo heli karaa nidaamyada hawlgalka daaqadaha. Tool ayaa xaddidaadda ah in aan la updated tan iyo 2000.
Features ee Burutus
Waxaa loo isticmaali karaa hab maamuuska network kala duwan
Tool waxay leedahay waxyaalo badan oo wanaagsan oo dheeraad ah
Wakiil sharaabad Support for dhammaan noocyada authentications
Awoodda maaraynta baadi iyo soo kabashada
Engine HUBINTA waa heerka multi
8. L0phtCrack: qalab Smart for Windows kabashada password
Sida qalab Ophcrack L0phtCrack sidoo kale waa Windows qalab kabashada sirta isticmaalaa hashes in crack sirta ah, oo leh waxyaabo dheeraad ah oo ka tirsan ciidanka caayaan oo weerar dictionary .
Waxay sida caadiga ah ku guleeysta helaan, kuwaas oo hashes ka tusaha, servers network, ama ilaaliyaal domain. Waa uu awoodaa inuu sameeyo saarista hash ka 32 & 64 yara nidaamka Windows, algorithms multiprocessor, jadwalka, iyo sidoo kale qaban karaan kelmadaha iyo la socodka shabakadaha. Habase ahaatee waxaa weli ugu fudud ee ay u isticmaalaan hanti dhawrka sirta ah iyo software kabashada heli karo.
Features ee L0phtCrack
Heli Windows XP, NT, 2000, Server 2003, iyo Server 2008
Ka shaqayn kara ee labada deegaanno 32- iyo 64-bit
Feature dheeraad ah oo jadwalka joogtada ah hanti dhawrka, maalin kasta, toddobaadle ah, saldhigyada bil kasta
Ka dib markii ay u siiyaan dhamaystiran oo Kooban Audit ee bogga warbixinta
9. Pwdump: Password qalab soo kabsado Windows
Pwdump waa barnaamij dhab ahaantii kala duwan Windows loo isticmaalo si ay u siiyaan su'aaalo iyo NTML hashes xisaabaadka nidaamka user.
Pwdump cracker password waa awood soo saarida su'aaalo, NTLM iyo LanMan hashes ka bartilmaameedka ee Windows, in haddii Syskey waa naafo, software awood u leh inuu soo saaro xaaladan.
Software waa update la feature dheeraad ah oo taariikh password muujiyaan haddii taariikhda waxaa la heli karaa. Oo laga soo minguuriyay ayaa laga heli doonaa foomka waa la jaan qaada L0phtcrack.
Dhawaan software waa la cusboonaysiiyaa si version cusub oo lagu magacaabo Fgdump sida Pwdump ma shaqeyn ganaax marka barnaamij kasta oo antivirus waxaa socda.
Features ee Pwdump
Heli Windows XP, 2000
Feature dheeraad ah awood leh ayaa laga heli karaa version cusub ee Pwdump
Kartida aad u ordaan multithreaded
Waxaa qaban karto cachedump (aqoonsiga burburtay qadaha) iyo pstgdump (qashin qubka kaydinta Protected)
10. Medusa: network degdeg ah qalab arrinkaas password
Medusa waa nidaamka fog password arrinkaas qalab sida THC Hydra laakiin ay xasiloonida, iyo awoodda login soomi jecel isaga THC Hydra.
Waa ciidanka caayaan degdeg ah, qalab isku midka ah iyo qaybsan. Software samayn kartaa weerar xoog caayaan ka dhanka ah dadka isticmaala badan, ciidammadow, iyo sirta ah. Waxa ay taageertaa hab maamuuska badan oo ay ka mid yihiin AFP, HTTP, CVS, IMAP, FTP, Ssh, SQL, POP3, Telnet iyo VNC iwm
Medusa waxaa pthread ku salaysan qalab, habkaani hortago baahneyn nuqul ka mid ah macluumaadka. Dhammaan modules laga heli karaa sida file .mod madax bannaan, si-u-habeynta ma loo baahan yahay in la kordhiyo liiska taageera adeegyada caayaan qasbo weerarka.
Features ee Medusa
Heli Windows, SunOS, BSD, iyo Mac OS X
Imtixaanka isku midka ku salaysan awood ugu leeyihiin qabashada Thread
Feature Good ah la gelin user debecsan
Sababo la xiriira habka xawaaraha isku midka ah ee arrinkaas waa si dhakhso ah
> Resource > Top List > Top 10 Password Qab qabashada Tools